Shirts → Zvipfeko zvebasa • nyanzvi P & M machira emakomputa
Mushandi wega wega anofanira kuzviratidza zvine hunyanzvi, nekuti ndiye anoita pachinzvimbo chekambani uye mumiriri wayo. Mashati inowanzo kuve chinhu chisinga tsanangurike chepfekero yebasa repahofisi, panzvimbo dzevashandi, panzvimbo yekugamuchira, asi kwete chete nekuti zvinoshandiswa munzvimbo zhinji.
mumaindasitiri akasiyana siyana.
Iyo yemhando yepamusoro zvipfeko kubva kuPoland nevatorwa vagadziri. Zvishandiso zvinonakidza kubata, zvakasimbiswa zvakasimba, izvo zvinoita kuti vagare. Zvese izvi kuti mahembe agone kushandiswa mumabasa ezuva nezuva kwenguva yakareba, inoenderana nekuwacha kwavo kazhinji, asi vagadziri vakafungawo. Kana mushandisi akatevera kurudziro yakanyorwa pamategi, hembe inomushandira kwemwedzi yakawanda.
Muchitoro chedu pm.com.pl inogona kuwanikwa hembe dzebasa uye mashati ne unyanzvi, mhando dzakanaka.
Vari chipfeko chisingachinji, munhu wese anofanirwa kuve neinenge imwechete yakanaka hembe. Ivo vanosiyaniswa nekunaka uye vanokodzera chinenge chiitiko chega chega. Saka iwe unogona kuzvisanganisa zvese zviri zviviri mune yakasarudzika uye isina kusarudzika musanganiswa. Yavo kunyatsoita kwekugadzira inofanirwa kutariswa zvakanyanya, nekuti iwo madiki madiki akagadziridzwa kusvika pakakwirira, izvo zvinosangana nezvinotarisirwa nevatengi vanonyanya kuda. Shirts anowanikwa mune maviri maBhaibheri - ane mapfupi uye marefu maoko.
Kudonha uye yechando basa mashati
Mashati kushanda Autumn uye nguva yechando zvinosiyaniswa zvakanyanya nekudzivirirwa kwakanakisa kubva kumatembiricha akaderera nemhepo. Shirts anouya akasiyana akasiyana, iwo anouyawo neakawedzera, gobvu rimwe kudziya.
Kutenda kune izvi maficha, inogona kupfekwa zvakasiyana ne nemvere. Thermal nyaradzo inoshandura kuita zvirinani kugara zvakanaka, izvo zvinokanganisa kugona kwemushandi zviri nani.
Hembe dzese dzakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro. Ehezve, mune mamiriro ekudziya anoshanda mamiriro mukuchinja kwemamiriro ekunze, iyo hembe inogona kupfekwa isina kuvharwa mabhatani T-shati pasi. Akanyatso kusonwa mabhatani kudzikisira mukana wekupokana netsaona. Nekudyara mune zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, yakanatswa zvakadzama, unogona kuva nechokwadi chekuti iko kutenga kweanopfuura mwaka mumwe.
Ivo vanozivikanwa kwazvo flannel shati, yakapfava uye inochinja. Chinhu chakanakira kudimburwa kwavo, uko kusingakonzere kusagadzikana pabasa, uye nekuda kwekuvhara, hakudi mamwe matanda.
REIS flannel yakadzivirirwa hembe
Shirt dzakanaka kuenda nebasa ndiwo musanganiswa weyakagadzirwa dhizaini uye inowedzerwa mukurumari. Iwo mamodheru aunogona kuwana muchitoro chedu anobva kune vane mukurumbira vagadziri vanoteerera zvakanyanya kune ruzivo uye nzira dzekusona. Anonakidza aesthetics anozoshandura zvakanaka kuva vashandi uye kugamuchirwa kwechiratidzo.
Izvo zvakakosha kuti usarudze saizi chaiyo nekuti saizi isiriyo inogona kusimbisa izvo zvisina kunaka uye kazhinji kuita zvinopesana nazvo. Izvo zvakafanira kutarisisa kune grammage, yakatetepa inokurudzirwa yezhizha, uye iwo mukobvu anoonekwa seakanyanya kwese - anoshanda mushe gore rese. Kuchengeta hembe dzakapihwa kuri nyore, ingo tevera iwo marongero pane akanyorwa, ayo asingasiyane kubva kune akajairwa ekurudziro ekurumbidza erudzi urwu rwechigadzirwa.
Mazhinji mahembe, ese akanaka uye mashati ebasa, anogona kuverengerwa ega machira emakomputa. Isu tine yedu peki yemuchina, saka tinogona kukuraira maitiro ekuita zvakanaka kumaka, kupi kwaungaisa logo uye kubatsira pakusarudza zviyero zvekushongedza.